Osomabhizinisi baxwayisa uRamaphosa | Isolezwe
Osomabhizinisi baxwayisa uRamaphosa
Izindaba / 15 February 2018, 7:10pm / BONISWA MOHALE
IBUSINESS Leadership South Africa (BLSA) idonse ngendlebe uMengameli omusha waseNingizimu Afrika uMnuz Cyril Ramaphosa, ukuthi asimamise umnotho wezwe ukuze kudaleke amathuba omsebenzi.
Isikhulu esiphezulu se-BLSA uMnuz Bonang Mohale, uthe uma kusimama umnotho kuzoncipha ububha, kwandle amathuba omsebenzi ikakhulukazi entsheni kwehle negebe elikhula njalo phakathi kwabampofu nabacebile.
“Siyakwamukelwa ukuqokwa kukaRamaphosa futhi sifuna alungise isimo enhlanganweni eqoqa intela iSouth African Revenue Service (SARS) nakwiNational Prosecuting Authority (NPA) ebonakala sengathi isetshenziswa ngabafuna ukufeza izinhloso zabo,” kusho uMohale.
Uthe kufanele kufakwe abaholi abanolwazi lokuletha inzuzo ezinkampanini zikahulumeni eziwayo.
“Sicela uRamaphosa aqinisekise ukuthi ikhomishini kaJaji Raymond Zondo ephenya ngokusetshenziswa kombuso yidlanzana iqala umsebenzi wayo. Kufanele bonke okufanele bashushiswe bathole ithuba labo enkantolo. Kufanele kuxoxwe nosomabhizinisi, abasebenzi nomphakathi ngezinhleo zokuthuthukisa umnotho ngoba abantu badinga ukwazi ukuthi izinto zizolungiswa kanjani,” kusho uMohale.
Uthe bazoqhubeka nokusebenzisana nohulumeni bengosomabhizinisi kanti bayathemba ukuthi uRamaphosa uzolwa nenkohlakalo avuse umnotho wezwe nezinkampani zikahulumeni eziwayo.